Home Wararka Fahad oo shaqada laga ceyriyay & Bashiir Goobe oo la magacaabayo
Wararka naga soo gaarayo Xafiiska Ra’iisal Wasaraha iyo Ilo lagu kalsoon yahay, Agaasimihii hore ee hay’adda NISA Fahad Yasin ayaa caawa shaqo fariisin lagu sameeyay.
Ilaha aan la xiriirnay ayaa intaas ku daray in dhawaan la shaacin doonaa qoraalka rasmiga ah ee ka soo baxay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha. Waxa sidoo kale qoraalkaas lagu magacaabi doonaa Bashiit Gobe in uu ku noqdo agaasimaha hay’adda.
Su’aasha ayaa ah RW ma ku adkeysan doonaa go’aankaas mise waxa lagu qasbi doonaa in uu ka noqdo. Farmaajo muxuu talaabo ah ee uu qaadi doonaa hadii war Warqadaas ay soo baxdo daqiiqadaha soo socda.